Ra’iisul wasaare Rooble iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku kulanmay Muqdisho | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Ra’iisul wasaare Rooble iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku kulanmay Muqdisho
Ra’iisul wasaare Rooble iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku kulanmay Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Maanta waxaa uu xarunta madaxtooyada Soomaaliya kulan kula yeeshay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Kulankan ayaa waxayuga wada hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha la xiriira doorashada, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay isla garteen in doorashada ku dhacdo waqtigeeda.
“ Kulan saacado qaatay ayaan maanta wada yeelanay ra’iisul Wasaare Maxamad Xuseen Rooble. Kulanka oo uu ra’iisul Wasaare Rooble igu martiqaaday ayaa iswaraysi iyo talo jeedin ahaa. Waxaan si gooni ah diirada u wada saarnay arrimaha mudnaanta leh oo ay ugu horayso doorashada oo xiligeeda ku dhacda si cadaalad iyo sinaan lehna u dhacda ” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa war uu soo saaray waxaa uu ku xusay in xafiiskiisu uu yahay mid u furan dhammaan siyaasiyiinta dalka, uuna gacmo furan kusoo dhaweynayo qof waliba oo danta dalka iyo dadkaba ka shaqaynaya.
“Waxaan maanta kulan qiimo leh aan wada yeelanay hugaamiyaha xisbiga wadajir Abdirahman Abdishakur Warsame oo aan wada gorfeeynay arimo badan oo ay ugu horeyso sidii lagu qaban lahaay Doorasho aan waqtigeeda dib uga dhicin . xaafiiskeygu waa mid 24 ka saac gacmo furan kusoo dhaweynaayo Saamileyda Siyaasadeed” ayuu yiri Maxamed Xuseen Rooble ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.